YEYINTNGE(CANADA): Friday, March 19
The Voice (6-20) ဂျာနယ်(မတ်၂၂)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/19/20100အကြံပြုခြင်း
19 March 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/v7lh31k19 March2010 Yeyintnge Diary
http://ifile.it/9oeab1qCEC and CC Meeting
ရန်ကုန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ဆန့် ကျင် စာများ ဝေ
၂၀၀ရ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ မှ ဦးဆောင်၍ ပြီးခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရန်ကုန်
မြို့ ရှိ လူစည်ကား သောနေရာများတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကို အသက်သွင်းမည့် ၂၀၁၀ ရွေး
ကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ဆန့် ကျင်ကြရန် လှုံဆော်သည့် စာများ လိုက်လံဝေငှခဲ့သည်။
မျိူးဆက်သစ် ကျောင်းသား များ ၂၀၀၇ အဖွဲ့ သည် ရန်ကုန် အပြင် ပုသိမ် ၊မော်လမြိုင်အစရှိသည့် မြို့ များ
တွင် လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ဆန့် ကျင်စာ များ လိုက်လံဝေငှခဲ့သည်။
ဗမာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ များ အဖွဲ့ချုပ်(ပြည်တွင်း)ရှိ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ ၂၀၁၀
ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာချိန် တွင် ကျောင်းသား၊ပြည်သူ၊ရဟန်း၊သံဃာ များ၏ လှုပ်ရှားမှု များ ပိုမို
ပြင်းထန် လာနိုင်သည် ဟု Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
ယမန် နေ့ က စာရွက် များလိုက်လံဝေငှသည့် ၂၀၀၇ ကျောင်းသား များ အဖွဲ့ ဝင် တစစ်ဦးက ရန်ကုန်
မြို့ ရှိ လမ်းဆုံ နှင့် လမ်းထောင့် တိုင်းတွင် စစ်အစိုးရက ကြံ့ဖွတ် နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များချထားသောကြောင့်
ဆန့် ကျင်စာများ ဝေငှ ရသည် မှာ အလွန်လှို့ ဝှက်စွာ လုပ်ဆောင်ရသည် ဟု ဆိုသည်။
မင်းဆွေသစ် | သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၁၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၀၇ မိနစ်
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏ အခန်း ၂ ပုဒ်မ ၆ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တွင်က ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းထား၏။ ပြီးလျှင် အခန်း ၂ ပုဒ်မ ၁ဝ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဈ) တွင်လည်း ပုဒ်မ ၆ ပါ အချက်များကို စောင့်ထိန်းလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံ၍ ဝန်ခံကတိပြုထားခိုင်းပြန်သည်။
ဖော်ပြပါ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့် ပုဒ်မ ၁ဝ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဈ) တို့၏ ဥပဒေအနှစ်သာရက …. ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်မရှိ…. ယခုအတိုင်း ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရမည်ဟူ၍ ….သက်ရောက်ပါက …. နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်မိသည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း ဟူသမျှသည် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား အဘိဓမ္မာသုံးပုံကဲ့သို့ ပြုပြင်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့….။ လေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတသိန်း စောင့်ရမည့်ဟန်….။ ထားတော့…။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/19/2010 1 အကြံပြုခြင်း
ဧရာဝတီ Thursday, March 18, 2010
ခင်ဗျားတို့ကတော့ အမှန်တရားဘက်မှာ ရှိကြတာပါ။ ညီမငယ်ရေ တောင်အာဖရိကမှာ နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား ထောင်က လွတ်လာ ပြီးတဲ့နောက် အစ်ကိုတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာသလိုပဲ မင်းကို မြန်မာပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်အစစ်အမှန်အဖြစ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ဖို့ တနေ့မှာ အစ်ကိုတို့ ရန်ကုန်ကို လာခဲ့ပါဦးမယ်။ အရှေ့က နေထွက်ပြီး အ နောက်ကိုဝင်နေသရွေ့တရားမမျှတမှုနဲ့ ဖိနှိပ်မှုရဲ့တရားခံတွေဟာ ပြိုလဲ ပျက်သုဉ်းကြရမှာပါ။ ခင်ဗျားတို့ကို ဘုရားသခင် ကောင်း ချီးပေးပါစေ။
Global Campaign on Burma’s 2010 Military Elections
• All Burma Students' Democratic Front (ABSDF)
• All Burma Young Monks' Union (ABYMU)
• Federation of Trade Unions - Burma (FTUB)
• Pa-O People Liberation Organization (PPLO)
• People's Patriotic Party (PPP)
• People's Liberation Front (PLF)
• People's Progressive Front (PPF)
• People's Defence Force (PDF)
• All Burma Federation of Student Unions - Foreign Affairs Committee
• All Burma Students Democratic Front
• Burmese Women's Union (BWU)
• Kachin Women's Association - Thailand (KWAT)
• Karen Women's Organization (KWO)
• Karenni National Women's Organization (KNWO)
• Kuki Women's Human Rights Organization (KWHRO)
• Lahu Women's Organization (LWO)
• Palaung Women's Organization (PWO)
• Pa-O Women's Union (PWU)
• Rakhaing Women's Union (RWU)
• Shan Women's Action Network (SWAN)
• Tavoy Women's Union (TWU)
• Women's League of Chinland
• Women's Rights & Welfare Association of Burma (WRWAB)
• Arakan League for Democracy - Youth Wing (Exile)
• Democratic Party foraNew Society - Youth
• Ta'ang Students and Youth Organization
• Chin Students' Union
Arakan Workers' Union
Center for People's Dialogue (Sri Lanka)
Chin National Community - Japan
Chin Women Organization - Japan
Italian Confederation of Workers Trade Union
Zomi Reunification Organization
Zomi Women’s Union
Our Position on Burma’s Military Election Laws
A Statement by Burma’s Movement for Democracy and Ethnic Rights
Our movement strongly condemns the regime’s undemocratic election laws released last week and sees them as confirmation that upcoming polls will only serve to legitimizeamilitary selection, and will in no way be genuinely democratic elections.
• The Union Election Commission Law, the first of five election laws, creates an Election Commission consisting of members handpicked by the State Peace and Development Council (SPDC). This Commission, which clearly lacks any independence whatsoever, is authorized to have final decision-making power on party registration, election postponement, and the formation of tribunals to judge election disputes.
• The Political Parties Registration Law bars our most viable opposition leaders and activists from the electoral process, by banning them from party membership and contesting the elections. The law also requires that parties register within 60 days, giving the National League for Democracy two months to decide whether to kick-out Daw Aung San Suu Kyi and almost 500 of its members who are behind bars, or becomeabanned party.
• The Political Party Registration Law also requires that political parties pledge to “abide by and protect” the 2008 Constitution,afundamentally flawed document designed to keep the military’s hold onto power. The constitution guarantees military entrenchment by placing army officials in top positions of power and above the law, provides blanket immunity for past atrocities, and centralizes military control over ethnic areas. Furthermore, the constitution cannot be amended without the military’s agreement, as they maintain effective veto power over amendments.
• The SPDC’s election laws suggest that elections may not be held in some ethnic areas. The Election Commission has the power to decide whether polling can be held in places affected by “natural catastrophe or security reasons,” which may include areas controlled by armed ethnic groups as well as ceasefire groups who have refused to be placed under the military’s command asaBorder Guard Force. This stipulation could disenfranchiseasignificant number of ethnic people.
Election laws are just one more means through which the regime is controlling the entire elections process. Instead of resolving conflict through peaceful means, the SPDC is taking coercive measures against the opposition, including the continued jailing of nearly 2,200 political prisoners, and ongoing attacks against ethnic people. In addition to the regime’s non-reconciliatory constitution, which denies demands for ethnic equality and federalism, the regime has increased hostilities against ethnic armed and ceasefire groups, in an effort to secure control over its borders, with devastating consequences for ethnic civilians. In 2009 alone, military offensives in Eastern Burma forced 43,800 ethnic people to flee over the border.
Burma’s movement for democracy and rights for ethnic nationalities has consistently called on the regime to meet the following minimum benchmarks for the elections to beastep towards genuine democracy and national reconciliation:
1) The unconditional release of all political prisoners, including Daw Aung San Suu Kyi;
2) Cessation of attacks against ethnic communities and democracy activists; and
3) Genuine and inclusive political dialogue, includingareview of the 2008 Constitution.
The regime’s new election laws serve asaclear signal that it does not plan to meet these benchmarks and that these elections will in no way be free, fair, or credible.
We believe that the election process, singlehandedly planned and completely controlled by the military regime, will in no way lead to national reconciliation or end the crises faced by our country. This isacrucial time for the international community to stand with the people of Burma.
We urge international governments to denounce the 2010 elections as undemocratic, and not recognize the results.
• National Council of the Union of Burma (NCUB)
• Democratic Alliance of Burma (DAB)
• National Democratic Front (NDF)
• National League for Democracy – Liberated Area (NLD-LA)
• Members of Parliamentary Union (MPU)
• National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB)
• Forum for Democracy in Burma (FDB)
• Women’s League of Burma (WLB)
• Students and Youth Congress of Burma (SYCB)
• Nationalities Youth Forum (NYF)
စစ်အစိုးရရဲ့ မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးရဲ့ ထောင်တွင်းမှ ရေးစပ်ထားတဲ့..
၁။ အခု…. ငါလက်တွေဟာ
လင်္ကာတပိုဒ်ကို ညီးဆိုဖို့ ဆွံ့အာနေလေရဲ့ ……..၊
ငါရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ငါရဲ့ အသွေးအသားတွေကို
တကယ့်ကဗျာ စစ်စစ်တပုဒ်ကို တွေ့ရလိမ့်မယ်
သဲကြိုးပြတ်သွားတဲ့ ဖိနပ်တွေ …….
ပိုင်ရှင်မဲ့ ကြိုးပြတ်နေတဲ့ လွယ်အိပ်တွေ ……
သီကုံးဖွဲ့ဆိုခဲ့ရတဲ့ ငါတို့ရဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပေါ့ ………….။
၃။ နွေရောက်တိုင်း လွမ်းကြစတမ်းဆိုရင်
လေနုအေးရဲ့ အနမ်းတွေမှာ …..
အဓိပတိလမ်းပေါ်က ခြေရာတွေမှာ …
ငါရဲ့ ရင်ထဲမှာ အမြဲတန်း
သမဂ္ဂ ပန်းတွေ ပွင့်နေလေရဲ့ ……။
အဲဒီမတ်လမှာဘဲ ငါရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ
ငါရဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေနဲ့ အတူ
ငါတို့ ကဗျာစစ်စစ် တစ်ပုဒ်ကို ရေးခဲ့ကြတယ်
အခုထက်ထိ ငါတို့ ရေးနေတုန်းဘဲ
တစ်ချို့ဆို အုတ်ရိုးနဲ့ သံတိုင်ကြားမှာ
အော်….. တစ်ချို့ကတော့ …………………။
၅။ လက်လုပန်ချဉ်ဖတ် တစ်ဖတ်နဲ့
အားဟာ အားဘဲ၊ တရားဟာတရားဘဲ
အားနဲ့ တရားကို ခွဲခြား
ငါတို့ဟာ တရားတဲ့ဘက်မှာရှိတယ် ………..။
၆။ ငါတို့ရဲ့ နှလုံးသားတွေ ကြွေပျက်သွားစမ်းပါစေ
ငါတို့ရဲ့ ဘဝတွေ လောင်ကျွမ်းသွားစမ်းပါစေ
ငါတို့ စိန်ပြေးတမ်း မကစားခဲ့ဘူး
ငါတို့ရဲ့ ပုခုန်းပေါ်ကို ရောက်လာတဲ့
တူညီတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ခရီးကြမ်းနှင်နေဆဲဘဲ
အဲဒါ… ဘယ်တော့မှ မညှိုးနွမ်းမဲ့
ငါတို့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေရဲ့ သမိုင်း
ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့တို့၏ ပူးတွဲကြေငြာချက်
http://ifile.it/le6d2szNCUB & MPU ပူးတွဲကြေငြာချက်....
ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် က...